Mmemme Ọrịa cancer Dr. Dr. Adem
N'ihi mmụba dị ala nke ọgwụgwọ ọrịa ọdịnala, anyị ewulitela usoro ọgwụgwọ ọrịa cancer na-aga nke ọma nke nwere ike ịbawanye ohere nke ịlanarị ọrịa kansa.
Ihe omume a dabara adaba maka ndi niile nwere oria cancer n’agbanyeghi n’uche iji mezi ihe ga adi n’otutu ogwu a ma obu n’ebu ihe ozo. Anyị nwedịrị ike inye aka mgbe ọgwụgwọ ọdịnala anaghị arụ ọrụ ọzọ.
Na-alụ ọgụ mkpụrụ ndụ cancer na-emerụ ahụ
Usoro ọgwụgwọ nke na - awakpo sel dị mma dịka otu mkpụrụ ndụ kansa enweghị ike isi were nke ọma. Ebumnuche ahụ ga-abụ ibibi mkpụrụ ndụ cancer ka a na-echebe akụkụ ahụ na sel sel. Usoro ọgwụgwọ anyị na-elele mkpụrụ ndụ cancer ma nwee mmetụta dị mma na mkpụrụ ndụ dị mma. Ezi ihe omuma bu Curcumin intraven intraven, nke bara uru megide otutu oria. E wezụga ibibi mkpụrụ ndụ cancer, ọ na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ọgụ na melite ọrụ akụkụ ahụ.
Na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ghara ịmata onye iro ahụ
Ngwá ọrụ kachasị ike megide ọrịa cancer bụ sistem gị. Mgbe mkpụrụ ndụ anyị na-alụso ọrịa ọgụ na-arụ ọrụ nke ọma, mkpụrụ ndụ cancer enweghị ike ịmalite. Ya mere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa ọ bụla cancer bụ, n'otu oge ahụ, nsogbu enweghị ike. Ọrịa cancer toro site n'ahụ gị, yabụ na sistem gị ji alụ ọgụ anaghị ewere ya dịka ihe iyi egwu.
Iji merie ọnọdụ a, anyị na-etinye usoro ọgwụgwọ na-eme ka mkpụrụ ndụ cancer gị mepụta ụfọdụ protein na elu ha. Usoro a na - eme ka ha pụta ìhè maka sel gị. N’ihi nke a, a na-ahụta ha dị ka ihe iyi egwu na a ga-ebuso ha agha.
Na-emeso na-enweghị eke nguzogide
Otu nsogbu dị mkpa na ọgwụgwọ ọrịa kansa bụ mmepe nke iguzogide ọgwụ cancer. Mkpụrụ ndụ cancer na-eme ihe dị mma ma nwee ike imeghari usoro ọgwụgwọ ọhụụ. Ka oge ụfọdụ gasịrị, ọgwụ ahụ anaghị arụ ọrụ ọzọ, ndị dọkịta aghaghị ịchọ ụzọ ọzọ.
Anyị nwere ike zere iguzogide ọgwụ ọgwụ cancer site na ijikọta ụzọ dị iche iche ma ọ bụ site na inye ihe ndị na-agbanwe ihe ọ bụla dị adị.
Na mgbakwunye, anyị azụpụtara usoro ndị pụrụ iche na-emepe mmegide na-agaghị ekwe omume.